7 Nzira dzekutumira Isina Kubudirira Nhare mbozha Email | Martech Zone
7 Nzira dzeKutumira Yakatadza Kubudirira Email Email
China, Gumiguru 3, 2013 China, Gumiguru 3, 2013 Douglas Karr
ReachMail manhamba anoratidza kuti anopfuura makumi mana muzana emaemail anovhurwa pane nhare mbozha. Ini ndinotarisa maemail pane yangu nharembozha zuva rese kuti ndikwanise kusvika kumaemail akakosha. Mazhinji emaemail andinodzima anotengesa mune zvakasikwa uye haaverengeki pane yangu iPhone. Panzvimbo pekuyedza kuswededza kana kuchinjanisa nemamiriro emamiriro ekunze, ini ndinongoadzima. Nekudaro, ini pandinosvika kuemail iyo ine mafonti makuru uye marongero akachena, ini ndinowanzo shandisa imwe nguva uye kupururura mairi.
ReachMail inounza iwe yedu infographic pane zvaunofanira kudzivirira pamushandirapamwe we mobile 7 Nzira dzekumhanyisa Isingabudirire Nhare mbozha Email Campaign.
Maitiro akachinja neemail email uye inguva yayo iyo vatengesi veemail vaisanganisa maitiro akanakisa ekuona kuti maemail avo aiverengeka, akakodzera, uye achikosheswa nevanozvinyoresa. Zvisinei nekuti idiki sei, ini ndichiri kuita sendinowana bhatani rekuzvinyora pane yangu mbozhanhare kana iyo email ikasazadzisa zvandinotarisira.
Tags: email dhizaininharembozha emailnharembozha email dhizainikusvitsa
Kushambadzira Automation Maitiro, Matambudziko, uye Kubudirira
Gumiguru 8, 2013 na12: 22 PM
Yakakura post uye info graphic nekuti inobata nzvimbo dzese dzakakodzera! nepo ichiratidzwa mu "negative" iyi inoita basa rakanaka chaizvo rekutsanangura iwo makuru makuru ezvaunofanira kuita.